Inona ny gorodona spc? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona ny gorodona spc?
Ahitsio: Denny　2019-12-17　Mobile
Ny tany SPC dia miorina amin'ny calcium-poly ary polyvinyl chloride stabilizer amin'ny ampahany sasantsasany mba hamolavola fitaovana famenonana mitambatra. Ny gorodona SPC dia mampiasa vovoka kalsioma ho toy ny fitaovana mazoto lehibe.Amin'ny fametahana plastika sy ny fanesorana ny takelaka dia tsy misy akora manimba toy ny formaldehyde sy metaly mavesatra, ilay gorodona miaro ny tontolo iainana tsy misy formaldehyde-gratis 100%. 0 gorodona formaldehyde.
1. Ny hatevin'ny mahazatra dia 4-5,5 mm ihany. Ny endrika volon-koditra dia fanavaozana sahy ao amin'ny indostrian'ny matihanina. Ny endrika vita amin'ny marbra, noho ny toetra mampiavaka ny akora, ny famoahana hafanana haingana ary ny fitahirizana ny hafanana lava, dia rihana voalohany amin'ny famatsian-jiro.
2, tsy misy poizina ary tsy matsiro, tsy matahotra ny rano, ny afo, na ny hamandoana; raha jerena ny fanoherana ny soritra, ny fampiasana ny fitaovana ary ny fanaovan-tsolika, ny valim-panafody SPC dia tsara kokoa noho ny gorodona milay.
3. Tsy hisy lavaka na rano amin'ny onjam-baravarankelin'ny hidin'ny SPC; tsy hisy seams intsony rehefa avy mamaivay. Mila tazomina miaraka amin'ny vokatra fikarakarana manokana.
4. Ny gorodona SPC dia heverina ho vanona fandrehitra vaovao amin'ny tsanganana, izay marihina amin'ny: tena milamina, fampiasa tsara, tanteraka tanteraka ny rano, famokarana haingam-pandeha avo lenta, ary fanoherana ny fanentanana; mety ho apetraka mora foana amin'ny karazan-tany isan-karazany, mivaingana, Gorodona na misy efa vita.
Toerana fampiasana fanalahidy SPC: Noho ny hateviny matevina, ny loko maro, ny fomba feno, ny fampisehoana fiarovana ny tontolo iainana karbonika be dia be dia be ampiasaina amin'ny akanin-jaza, hopitaly, birao, biraon'ny birao, toeram-pivarotana lehibe, trano, KTV ary toerana hafa an'ny daholobe.
Inona ny gorodona spc? Ny atiny mifandraika
Inona no akora miraikitra amin'ny gorodona spc?
Ny tany SPC dia miorina amin'ny calcium-poly ary polyvinyl chloride stabilizer amin'ny ampahany sasantsasany mba hamolavola fitaovana famenonana mitambatra. Fitaovana vaovao, efi-trano malefaka SPC v...
Noho ny toetran'ny fihanaky ny thermal sy ny fanakorontanana ny gorodona birao PVC dia maro ny mpanjifa no mitatitra fa matetika tsy voasarika ny tany rehefa ririnina. Raha ny tena izy dia tsy olana ...
Ny gorodona SPC dia mitarika ny lamaody fanamboarana trano, tsy ho variana amin'ny gorodona vita amin'ny hazo intsony
Ny kitay vita amin'ny kitay dia fitaovana vita amin'ny rihana voalohany ho an'ny olona, satria nalaina tamin'ny akora matevina avo lenta izy io, tsara tarehy ny hazon'ny hazo ary mafana ny loko. Floo...
Inona no karazana trano tsy fahita sy rano azo antoka amin'ny tontolo iainana?
Inona no akora ampiasaina amin'ny gorodona?
Inona avy ireo fomba fampihenana ny tany?
Mora hitazomana ny gorodona matevina?
Ny atiny mifandraika
KINGUP SPC mpanamboatra trano
Inona no tsy mampitovy ny gorodona WPC sy PVC?